Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi Iley oo Noqday Madaxa xafiiska Shirkadda Ethiosmali Share Company – Noora Afgaab
Cabdi Iley oo Noqday Madaxa xafiiska Shirkadda Ethiosmali Share Company – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ November 11, 2014
Addisababa – Dawlad Deegaanka Somalida ayaa looga yaqaanaa xafiisyada federaalka ee Adis Ababa (Ethiosmali Share Company), taasoo macnaha ay ula jeedaan ay tahay inay noqotay Ogadenya Shirkad Ka Dhexeysa wasiiro iyo jeneraalo ay magaca dhabaan.
Waxyaabaha looga sheekeysto xafiisyada federaalka ayaa waxaa ka mid ah inay Qasnajiga Shirkada mr Cabdi iley ee Dawlad Degaanka Somaalida xaladiisa marba marka kadanbeysa sii xumaneyso, waxana hada gabihaanba meesha ka baxday nimaadkii xisbinimada. Waxay yidhaahdee qaabdhismeedkii maamulka dawliga ahaa ayaa si degdeg ah isugu badalay company weyn oo shaqooyinka uu qabto ay kamid tahay in uu xawilo lacagaha iyo in loo soo xawilikaro (money transfer).
Guud ahaan lacagta aay federalku usoo diraan degaanka 50% kamid ihi waxay dib ugu noqotaa isla masuuliyiinta federalka. Si aan taas loo dareemina waxay yidhaahdeen wuxuu Cabdi iley sameeyey in shacabka lagu soo rogo canshuur dhiig
miirad ah oo aan wax sharci ah oo lagu saleeyey ayna jirin isla markaana aan waafaqsaneyn nimaadka iyo sharciga canshuur ururinta.
Hadaba Cabdi iley ayaan dhihikarnaa waa nin uun companigaas waakiil u ah oo fadhiya head quarter-koda oo ah magaaladan Jigjiga. Shirkadan oo ciidan badan haysata ayaa waxay degaanka ka qabataa laba arimood oo kali ah; in aay shacabka layso iyo inay lacagahas dib u xawisho oo kaliya. Shirkadani waxaay branches kale ku leedahay magaalada Harar iyoAddis ababa.
Waxaa muhiim ah bay dheheen in dadka loo bayaamiyo sida ay shirkadani ushaqeyso iyo in aayna meesha dawladnimo ka jirin. Saad u aragto habka ay shirkaddan u shaqayso oo lacagaha ay u kala dirto Riix Halkan (Money Transfere in DDS) . Waa jaantus hoos ahaan loogu qaybiyo Adis Ababa oo si dhibyar aad uga fahmi kartaan sida loo qaybsado oo ay lacagtu dib ugu noqoto meelihii loogu talagalay.
Noora Afgaab/ Adisababa